Moto X-ka cusub ee 2014 wuxuu horeyba u helayaa Android 5.0 Lollipop | Androidsis
Moto X-ka cusub ee 2014 wuxuu horeyba u helayaa Android 5.0 Lollipop
Motorola waxay sii wadaa inay sii deyso cusbooneysiinta boosteejooyinka. Marka hore wuxuu ahaa cusub Motorola Moto G 2014 , Taleefankii casriga ahaa ee ugu horreeyay ee si rasmi ah u hela casriyeynta muddada dheer la sugayay ee nooca ugu dambeeya ee nidaamka qalliinka Google. Kadib Android 5.0 Lollipop wuxuu yimid Motorola Moto G 2013. Haddana waa markiisa cusub Moto X 2014.
Waana in calaamadda cusub ee soo saaraha ay durbaba bilaabeyso inay hesho casriyeynta ugu dambeysay ee nidaamka hawlgalka Google ee Yurub. Sidii caadada u ahayd, cusbooneysiintani waxay ku timaadaa qaab jahawareer leh markaa ku kalsoonow in labada toddobaad ee soo socda aad heli doonto ogeysiis muddo dheer la sugayay oo lagu cusbooneysiinayo cusub Moto X 2014 illaa Android 5.0 Lollipop.
Moto X-ka cusub ee 2014 (XT1092) wuxuu durba Yurub ka helayaa Android 5.0 Lollipop
Xusuuso in Moto X cusub waa dahabka taajkii Motorola ee Yurub. Shaashadda Moto X-ka cusub wuxuu ka kooban yahay 5.2 inch oo AMOLED guddi ah oo gaara xal buuxa oo HD ah oo ay weheliso cufnaanta pixel ee 423 dpi. Muuji gudigeeda Corning Gorilla Glass 3 kaas oo ka ilaalin doona taleefanka inuu yeesho xoqooyin dhib leh.
Faahfaahin kale oo xusid mudan waa hagaajinta tayada sawirka. Isbarbardhiga Moto X-da cusub iyo kii ka horeeyey waxaa jira horumar muuqda. Shaqo fiican ayaa ka timid Motorola si aan kuu helo shaashadda ayaa runtii u muuqata mid fiicanxitaa jawiga iftiinka iftiinka leh iyo xagasha daawashada ayaa kudhowaad buuxa.
Qalbigeeda silikoon waxaa sameeyay a Processor Qualcomm Snapdragon 801 leh afar koronto oo ah 2.5 Ghz oo awood leh, oo ay weheliso 2 GB xasuusta RAM ah, waxay ku siisaa qalabka aaladda kor u qaadaysa dhamaadka suuqa.
Midka kaliya laakiin wuxuu la yimaadaa keydinta gudaha. In kasta oo ay run tahay in ay jiri doonaan laba nooc, mid leh 16 GB iyo mid kale oo leh 32 GB, Moto X-da cusubi ma laha booska kaarka SD-ga yar. Guul-darrooyin wax ka badan hal dhib gelin kara. Inkasta oo dadka isticmaala badankood ay ku filnaan doonaan 32 GB oo ah xusuusta gudaha.
Shaqo fiican ayaa ka timid Motorola taas oo, haddii ay sidan ku sii socoto, ay ku dambayso inay noqoto soosaaraha ugu jecel ee adeegsadayaal badan oo Android ah. Iyo qadiimiyadii Samsung ee balwada lahaa ee u gudbay safka weyn ee M.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Moto X-ka cusub ee 2014 wuxuu horeyba u helayaa Android 5.0 Lollipop
A5-kii loo yaqaan 'MotoG 2014', wuxuu ahaa tababbar booby ah. Wali waan sugeynaa. Isku day inaad si fiican u aqriso waxa 'republicais' maxaa yeelay faahfaahinta ayaa fure u ah. Waxay u adeegsanayaan OS inay fiicnaadaan taas macnaheedu waa inay u qaataan OS nacasyada.
Ku jawaab nachobcn
Kr OwnzYou dijo
Waan hayaa mana haysto cabashooyin waaweyn, marka laga reebo xaqiiqda ah inaysan taageerin OTG iyadoon xidid laheen, taas oo leh S4-ta aan haysto sannad aan u isticmaali karo dhib la'aan. Xaddidaadda isticmaalka OTG waa nacasnimo. Kaamirada wax badan ayaa ka tageysa qiimaha terminalka. Dhinaca kale, in kasta oo ay tahay qalab heer sare ah, haddana ma haysto samaacado ama nooc kale oo qalab ah, marka laga reebo aaladda si looga saaro nano sim, xogta keydka iyo xeedho.
Jawaab Kr OwnzYou
Sawirada ugu horreeya ee Sony Xperia E4 waa la sifeeyey
Android 5.0 Lollipop wuxuu u yimaadaa Samsung Galaxy S4 Google Play Edition